Maxaa kasoo baxay kulanka dhex-maray Farmaajo iyo Abiy? | Dalkaan.com
Home Warkii Maxaa kasoo baxay kulanka dhex-maray Farmaajo iyo Abiy?
Addis Ababa (dalkaan) – Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) oo haatan ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa kulan gaar ah la qaatay ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya, Mudane Abiy Axmed.
Labada mas’uul ayaa marka hore iska xog wareystay arrimo ku aadan xaaladda gobolka geeska Afrika iyo xiriirka labo geesoodka ah ee labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya.
Sidoo kale labada dal oo daris wadaag ah ayaa Farmaajo iyo Abiy waxay kulankooda ku soo hadal qaadeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gudaha Soomaaliya.
War kooban oo ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa waxaa lagu faah faahiyey muhiimadda kulanka dhex-maray Farmaajo iyo Abiy Axmed oo haatan saaxibo ah.
Previous articleQM oo bayaan culus kasoo saartay dadkii laga soo masaafuriyey Laascaanood
Next articleMaxaa looga baahnaa reer Laascaanood, kadib tallaabadii Somaliland?
Xiisaddii Somaliland iyo QM oo dib u qaraxday iyo Muuse Biixi...